အီရတ်ကဗျာဆရာ ဆာအာဒီ ယူဆက်ဖ် – zlkontempo
အီရတ်ကဗျာဆရာ ဆာအာဒီ ယူဆက်ဖ်
Posted on June 29, 2013 | by zlkontempo
အီရတ် (Iraq) ကဗျာဆရာ ဆာအာဒီ ယူဆက်ဖ် (Saadi Yousef) ဟာ ယနေ့ခေတ်ပြိုင်အာရပ်ကဗျာလောကမှာ အထင်ကရ ကဗျာဆရာတစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဆရာမြို့နားက တောရွာလေးတစ်ရွာမှာ ၁၉၃၄က မွေးဖွားခဲ့ပြီး ကဗျာနဲ့ စကားပြေလုံးချင်း ၄၀ ကျော်ရေးသားထုတ်ဝေပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကနေ အာရပ်ဘာသာပြန်အလုပ်လည်းလုပ်ပါတယ်။ ၁၉၅၄ မှာ ဘဂ္ဂဒက် တက္ကသိုလ်က အာရပ်ဘာသာရပ်နဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး အဲဒီအချိန်ကတည်းက လက်ဝဲနိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေထဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကဗျာကိုလည်း အဲဒီကာလကစရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွေမှာ နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ ထောင်ကျခဲ့ပြီး ထောင်ကလွတ်လာတဲ့အခါ အယ်လ်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံကို ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၁ မှာ အီရတ်ကိုပြန်လာပြီး ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှာအမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၉ မှာ ဆဒ္ဒမ်ဟူစိန်တက် လာတော့ အီရတ်ကနေ ထပ်မံထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ မြေထဲပင်လယ်ဒေသအနီးရှိ အာရပ်နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ပြည်ပြေးတစ်ယောက် အနေနဲ့ နေထိုင်ခဲ့ပါ တယ်။ ဆဒ္ဒမ်ဟူစိန်ကို တောက်လျှောက်ဆန့်ကျင်ခဲ့ပြီးအခု လန်ဒန်မှာ အခြေချနေထိုင်လျှက်ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၂ မှာ သူ့ကဗျာတွေကို လစ်ဗျားကဗျာဆရာ ခါလစ်ဒ် မတ်တေးဝါး (Khaled Mattawa ) က အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ပြီး Without an Alphabet, WithoutaFace ခေါင်းစဉ်နဲ့ အမေရိကန်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
ယူဆက်ဖ်ရဲ့ ကဗျာတွေဟာ နေ့စဉ်သုံး ပစ္စည်းတွေနဲ့ အသေးစိပ်အချက်အလက်တွေပေါ် အခြေပြုကြပြီး အဲဒီပစ္စည်းတွေ အချက်အလက်တွေထဲက လောကတွေနဲ့ သမိုင်းရဲ့ တွန်းအားတို့ပေါ်ထွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရယ်ကြီးတဲ့ အခြေအနေတွေ အောက်မှာ နေထိုင်ခဲ့ရတော့ နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းဟာ သာမန်ပစ္စည်းတွေ ၊ သာမန်အဖြစ်အပျက်တွေပေါ် အာရုံသိမြင်မှုပိုစူးစိုက်စေ လာပါတယ်။ သာမန်အရှိတရားနဲ့ အာရုံမှောက်မှားခြင်းတို့ကို ကွဲပြားစေတဲ့ မျဉ်းဟာ ရံဖန်ရံခါေ၀၀ါးသွားတတ်ပါတယ်။ သာမန်သရုပ်ဖေါ် မှုဟာ ဆူရီယလ်ဆန်ဆန် ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ သာမန်နေ့စဉ်နေထိုင်မှုထဲက သက်ရှိရှင်သန်နေတဲ့ အော်သံတစ်ခုဟာ သူ့ကဗျာ ထဲမှာ ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ယူဆက်ဖ်ရဲ့ ကဗျာတွေဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ခံစားမှုနဲ့အတူ လောကကြီးနဲ့ မိမိတို့ ရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ ခေတ်အခါသမယကြီးကို ပီပြင်ရှင်းလင်းစွာ ကြည့်မြင်ပြီး ရေးသားဖွဲ့ဆိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ဟာလည်း မိမိတို့နေထိုင်ကြရတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ မိမိတို့ရဲ့ စကားသံ (voice) ကို အဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီး ၊ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဟာ မိမိတို့ရဲ့ သမိုင်းဖန်တီး ရှင်တွေဖြစ်ကြတာနဲ့အတူ မိမိတို့ရဲ့ အသံကို ပိတ်ပင်ခြင်းမခံရအောင်ပြုမူဆောင်ရွက်နေကြရမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ ယူဆက်ဖ်ရဲ့ ကဗျာ တွေမှာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ဘယ်ပန်းတစ်ပွင့်ကိုမှ ဒင်းတို့ခိုးယူကြမှာ မဟုတ်ဘူး
ဘာလို့ဆိုတော့ သင်ဟာ အရာဝတ္ထုနဲ့ ရုပ်ပုံကြားပျောက်ဆုံးနေလို့ပဲ
အမေ့ပျောက်ခံ ခံမြို့ ၊ သင့်မင်းတုပ်တွေဟာ လူသူမဲ့ခဲ့ပြီ။
သင်ဟာ ခေါင်းမာမာနဲ့ မားမားကြီးရပ်နေခဲ့တယ်
ရင်ပြင်မှာ သင့်အလံနီတွေ လွှင့်ထူလို့။
(`အိုလီယန်ဒါပင်´ ကဗျာမှ) (၂၀၀၂)
မနေ့က ရေဒီယိုမှာ လူတစ်ယောက်အသံကြားလိုက်ရတယ်
လိုင်လီကီ နဲ့ ဆူလမ်ကြားက `ပေါက်ကွဲမှု´တွေကြား
ဘေရွတ်မြို့ရဲ့ ကျောက်တုံးတွေဟာ ငါ့ကျောခင်းရာတွေပဲ ၊
ဘေရွတ်မြို့ဟာ ပင်လယ်ငှက်တစ်ကောင်လို ထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်
ချစ်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စက်သေနတ်တွေကို
ကလေးတွေဟာ သစ္စာဖေါက်အသံတစ်သံကို နားဆင်ကြတယ်
မယ်ရီယမ် ၊ မင်းအတွက်တော့ ချစ်သူတွေနဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေပဲ။
(`မယ်ရီယမ်ရောက်လာပြီ´ ကဗျာမှ) (၂၀၀၂)
ပြီး ၊ အသံအုပ်အုပ်နဲ့ ဘုရားစာရွတ်ဆိုခြင်းတွေ
တိတ်ဆိတ်သွားကြတဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေ ၊
ပြီး ၊ ဆင်းရဲတဲ့ ကလေးမလေးတွေ မူးမေ့လဲကျကြတဲ့
စွပ်ပြုတ်လုပ်သောက်ဖို့ အရိုး ၂ ချောင်းလက်ဆွဲလို့။
အရုဏ်ဦးမှာ သူမရဲ့ အိမ်တွေအားလုံးရှေ့ရပ်နား
သူမရဲ့ ကလေးတွေအားလုံးကို အိပ်ရာနှိုး
သူတို့ကို လမ်းပေါ်တရွတ်ဆွဲချ ၊
(`ဘဂ္ဂဒက်သစ်´ ကဗျာမှ) (၂၀၀၂)
ငါတို့ချာတိတ်တွေ ၊ ရပ်ကွက်ထဲက ဖိနပ်မပါလေးတွေ
ငါတို့ချာတိတ်တွေ ၊ ရပ်ကွက်ထဲက အ၀တ်ဗလာကျောမွဲလေးတွေ
ငါတို့ချာတိတ်တွေ စွံပလွံသီးနဲ့ ရွှေဖရုံသီးခွံတွေစားပြီး
ငါတို့ချာတိတ်တွေ ဟာဆန်အလ်ဘာစရီ ဂူဗိမာန်ကနေ
တန်းစီနေကြလိမ့်မယ် ၊ မနက်ခင်းမှာ သင့်ကို
ငါတို့အော်ဆိုကြလိမ့်မယ် ၊ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ
ငါတို့သံပြိုင်အော်ကြမယ် ၊ အမတအထိရှည်ပါစေ
ငါတို့ကြားကြလိမ့်မယ် ၊ စကော့တလန်အိတ်ပုလွေသံတွေ ၊ မြူးကြွ
ရံဖန်ရံခါငါတို့ရယ်မောကြလိမ့်မယ် ၊ အိန္ဒိယစစ်သားရဲ့ ကျင်စွယ်တွေ
ဒါပေမယ့် ငါတို့ရယ်မောသံတွေထဲ စိမ့်ဝင်ရောနှောလာတဲ့
ငါတို့သံပြိုင်အော်ကြတယ် ၊ သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ
ငါတို့သံပြိုင်အော်ကြတယ် ၊ အမတအထိရှည်ပါစေ
ပြီး ၊ သင့်ထံငါတို့ လက်တွေဆန့်လိုက်ကြတယ်
ငါတို့ဟာ ဟောဒီရွာလေးမှာ မွေးဖွားလာကြကတည်းက
ငါတို့ကို အသားပေးပါ ၊ ပီကေပေးပါ
သံဗူးတွေပေးပါ ၊ ငါးပေးပါ
ပေးပါ ၊ ငါတို့ကို ၊ အဲသလိုဆို
ဘယ်မိခင်မှ သူ့ကလေးကို စွန့်ပစ်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး
ငါတို့ဟာ ရွှံ့စားပြီး အိပ်ရတဲ့ ဘ၀မရောက်ကြတော့ဘူး
ငါတို့ ချာတိတ်တွေ ၊ ရပ်ကွက်ထဲက ဖိနပ်မပါတွေ
သင်ဘာကြောင့် ရောက်လာသလဲ ငါတို့မသိ
ဘာကြောင့်ငါတို့ အော်ဆိုကြသလဲ `သက်တော်ရာကျော်
ငါတို့လက်တွေ သင်တို့ထံဆက်လက်ဖြန့်ထားရမှာလား ။ ။
အို . . . . အလွမ်း ၊ ငါ့ရန်သူ
ဒီကိစ္စငါတို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာ နှစ် ၃၀ ရှိပြီ။
ခရီးတစ်ခုမှာ သူခိုး ၂ ယောက်လို ငါတို့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်
အဲဒီခရီးအကြောင်း ဘာမှ ဂဃနဏ ငါတို့မသိခဲ့ကြ။
မင်းရဲ့ သစ်သားထိုင်ခုံကတော့ ရထားအားလုံးစီးလို့
မြေဖြူခဲနဲ့ ရေးဆွဲထားတဲ့ ရုပ်ပုံတွေ
မင်းကိုငါတစ်ချက်ဖြတ်ကနဲကြည့်လိုက်တယ် ၊ ပြီး
မင်းနဲ့ ဝေးရာ ၊ ဝေးရာ ၊ ဝေးရာ
ငါပြောတယ် ၊ လမ်းဟာ ရှည်လျားတယ်။
ငါ့အိတ်ထဲက ပေါင်မုန့်နဲ့ ဒိန်ခဲတစ်စိပ်ထုတ်လိုက်တယ်
မင်းရဲ့ အကြည့်ဟာ ငါ့ပေါင်မုန့်နဲ့ ဒိန်ခဲကိုယူစားတယ်။
ငါ့ကို သိမ်းငှက်တစ်ကောင်လို ဘယ်လိုခုန်အုပ်လိုက်သလဲ။
ဒီမှာ ၊ နားထောင်
မင်းထိုင်ခုံကနေထပြီး ရထားပေါ်က အခုပဲဆင်းသွားပါ
ဒီဘူတာပြီးရင် ငါ့ရထားဟာ တရကြမ်းခုတ်မောင်းတော့မှာဖြစ်တယ်
အဲဒီတော့ ၊ မင်းဆင်းတော့
ဘယ်ရထားမှ ရပ်နားမှာ မဟုတ်တဲ့ အရပ်ဆီ။ ။
ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ ညှဉ်းပမ်းခံများ (အာဘူ ဂရာအစ်ဗ်သို့)
ပရုပ်အတွက် ၀ံပုလွေခွေးတွေရဲ့ အစွယ်တွေ။
ပိတ်ထားတဲ့ အချုပ်ခန်းဟာ ရုတ်တရက်ပွင့်သွားတယ်
ငါတို့ရဲ့ ဖူးယောင်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ
သူမဟာ မရေရာမပြတ်သားတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုက လာတာလား
ငါ့ညီနောင်ရဲ့ သွေးစီးနေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို
သားသတ်ရုံတွေရဲ့ တိုက်ကြီးတွေဆီက အနံ့တွေ
အရှင်မြတ်ရဲ့ တမန်တော်တွေဟာ ဒီလာကြမှာ မဟုတ်ဘူး
ငရဲက လင်းနို့တွေ တောင်ပံခတ်နေကြတာဖြစ်တယ်
အို . . . အရှင်မြတ် ၊ ယုံကြည်သူ မိမိတို့ စောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်
မိမိတို့ အချုပ်ခန်းတွေ မနေ့က ပွင့်သွားခဲ့ကြတယ်
ကြမ်းပြင်တွေမှာ မိမိတို့ မလှုပ်မယှက် လဲလျောင်းလို့
ဒါပေမယ့် ၊ မိမိတို့ဟာ အရှင်မြတ်ဆီလာနေပြီ
မိမိတို့ကို ပစ်ပယ်ရင်တောင် လမ်းကို မိမိတို့
မိမိတို့ဟာ အရှင်မြတ်ရဲ့ သေဆုံးသူသားတွေပါ
သူတော်စင် ပရောဖက်တွေကို မိမိတို့အတွက်
ပြောကြားလိုက်ပါလှည့် ၊ မိမိတို့လာနေကြတဲ့ အကြောင်း
မိမိတို့ ကိုယ်မိမိတို့ သဲခြောက်နဲ့ သန့်စင်ပြီးကြပြီ
တမန်တော်တွေဟာ မိမိတို့ကို သိကြတယ်
မိမိတို့ တစ်ယောက်ချင်းစီကို သူတို့သိကြတယ်။ ။
မှတ်ချက် ။ ။ အွန်လိုင်းမှ အချက်အလက်များနှင့် ကဗျာများကို ရယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
27 – May – 13
Posted in Articles, Poetry | Tagged Poetry, Saadi Yusof
. . . အစီအစဉ်မရှိကြောင်း